Jerena ihany koa ny resaka fanalan-jaza mba tsy hisy, satria tokony hisy fanampiana ireo tovovavy hiaro tena, nefa koa tsy hanala zaza raha sendra bevoka tsy niriana na tsy neken'ny Ray aman-dreny, na nilaozan'ny ray.
Hisy fananganana sekoly ambony momba ny Reny sy ny zaza, ny fanampiana ireo sekoly, na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana, manofana sage-femme, sy Reninjaza.
- Hisy ezaka manokana atao, ankoatran'ny resaka fahadiovan'ny tanàna, ny toeram-ponenana, fanana lavapiringa na WC, ny fahadiovan'ny sakafo, fahadiovana any an-tsekoly sy toeram-piasana, hanafoanana ireo karazan'aretina efa tsy tokony hisy eto amintsika intsony. Toy ny tazo na Paludisme izay azo avy amin'ny moka, ny raboka sy kohodavareny, ny BK, ny fahabokana, ny polio, sy ireo areti-tratra sy areti-kibo vokatry ny loto sy ny tsy fanjarian-tsakafo.
Ny Fanjakana no hiantoka tanteraka ny fitsaboana ireny aretina ireny.
- Ho raisin'ny fanjankana an-tanana ihany koa ny dépistage na ny fitiliana mialoha ary ny fitsaboana ny aretina homamiadana na ny cancer, ny insuffisance rénale, na ny aretin'ny voa sy ny aty (rein - foie), ny diabeta, ary ireny karazana aretina tsy fahita firy nefa mampitondra takaitra ireny, ireo areti-mifindra toy ny SIDA, sy ny aretina azo avy amin'ny firaisan'ny lahy sy ny vavy ireny.
Hijanona tsy ho ekena ny fanambadian'ny lahy sy ny lahy, na ny vavy samy vavy. Tsy ekena ny fananganan-jaza ho an'ny mitovy fananahana. Tsy maintsy lahy sy vavy no afaka manorina tokantrano. Afaka miaraka izay te hiaraka, safidy izay, fa ny "mariage légal pour tous" izany tsy ho ekena.
- Ho raisin'ny fanjakana an-tanana avokoa ireo manana kilema ambonin'ny 25% fahafahana ananany (Personne handicapée à plus de 25%). Ireo afaka miasa, dia hisy toeram-panofanana asa, ka dia ampiana izy ireo amelon-tena, na dia misy hatrany aza ny fanampiana ara-bola sy ara-pitaovana omena azy ireny.
Amporosihina ny teknisianina hanamboatra ny fitaovana ilain'izy ireny.
Ho entitra ny fametrahana ny lalàna hanajana ireny olona manan-kilema ireny, na ao anaty fiara fitaterana olona, na ny fahafahan'izy ireny miditra birao, na mandeha WC, na ny eny an-dalana, izay mila repère ho an'ny jamba (Accessibilité et circulation autonome).
- Atao vaindohan-draharaha ny fitiliana ny aretina mialoha, hisorohana ny fitsaboana mavesatra.
- Ny Malagasy tsirairay dia manana Zo ara-pahasalamana, ka dia apetraka ny politikam-pahasalamana hiantsoroka ny fandaniana ara-pahasalamana. Isaky ny vata-karaman'ny tsirairay dia hakana 1% isam-bolana, ho fitsonjovana ny fahasalamana, ary 3% no alaina amin'ny mpampiasa. Ka rehefa misy ny aretina mahazo ny tsirairay, dia ny Fanjakana no miantoka tanteraka ny fitsaboana, ankoatran'ireo izay ny assurance no miantoka azy, raha accident circulation, na accident de travail, na accident tany ampianarana.
- Tsy maintsy misoratra any amin'ny OSTIE na OSIE na izay mifandraika amin'izany ny mpiasa rehetra. Ny Service national rehetra. Omena tosika izany ireny orin'asa mpitsabo tsy miankina ireny hanenika ny faritra sy ny Kaominina rehetra.
- Raisin'ny fanjakana manontolo ny fitsaboana ireo mpiasam-panjakana.
- Hatsaraina sy omena fitaovana avokoa ireo hopitaly efa misy sy ny CSB1 sy CSB2.
- Asiana dentiste, mpitsabo maso sy sofina, toeram-pandidiana ary radiologie, pharmacie, isaky ny Kaomina 3 mifanakaiky. Omena fitaovana sy fanampiana manokana, na trano hipetrahana ireo mpitsabo sy farmasianina.
- Anangana sekoly ambony momba ny fahasalamana, izay ampiarahina amin'ny fananganana hopitaly 3 lehibe ao anatin'ireo faritra 3, avaratra, afovoany, atsimo. Hisahana ny resaka fikarohana ihany koa izy ireo, ka hiara-hiasa amin'ny indostria mpanao fanafody Malagasy, ka hijerena manokana ireny raokandro Malagasy, ireny hazo sy ravin-kazo fanasitranana ireny, hiara-hiasa amin'ireny mpanao ody may, ody biby, ody tapaka sy mpanotra ireny.
- Ny orin'asa manana mpiasa mihoatra ny 500 dia tsy maintsy manana centre de santé sy dokotera mpitsabo.
- Isaky ny sekoly manana mpianatra mihoatra ny 500 dia tsy maintsy manana infirmerie sy olona mahay ny vonjy taitra.
Teti-bola sy famatsiam-bola
Raha ilay karama farany ambany 200 000 ariary omena ny latsaky ny Bac no handraisana ny kajy ambany, nefa 1% aloan'ny mpiasa, ary 3% aloan'ny mpampiasa, dia 8 000 ariary (40 000fmg) isam-bolana, isaky ny mpiasa no hiditra amin'io teti-bola io, izany hoe 96 000 Ariary (480 000fmg) isan-taona.
Ka raha 8 000 000 ny isan'ny olona miasa, tafiditra ao ny service national rehetra, dia hitentina 768 miliara ariary (3 840 milliards fmg) izany. Io avy dia voasintona amin'ilay carte électronique, vao mandray karama, ka tsy hisy tsy andoa izany.
Ny vola azo eo dia hitovy hatrany ny fitsinjarana azy:
50% andeha any amin'ny CSB1 Fokontany
25% CSB2 Kaominina
10% Hopitaly Faritra
15% Ministeran'ny fahasalamana Foibe.
- Ho jerena manokana ny anosehana ny fahaizamanaon'ny Mpitsabo, ny Pharmacien sy ireo paramed na mpitsabo mpanampy Malagasy, ka dia atao mifanentana amin'ny asan'izy ireo ny karaman'izy ireo. Hisy prime isaky ny spécialité.
Hiadiana kosa ny resaka kolikoly sy fitondran-tena izay tsy mahay mandray marary. Tsy ekena izany marary tsy tsaboina izany satria hoe tsy manam-bola.
- Ny carte électronique n'ny tsirairay no ampiasaina amin'ny fitsaboana, hisy ny informatisation dossier médical mba ho mora anarahana ny fahasalaman'ny tsirairay, ka na mifindra dokotera hafa aza, dia hitan'ilay dokotera mandimby ny aretina sy ny fanafody na ny radio efa natao rehetra. Tandrovana ny secret médical.